မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အင်္ဂလိပ်စာ ဘာကြောင့်မတတ်ကြသလဲ..
အင်္ဂလိပ်စာ ဘာကြောင့်မတတ်ကြသလဲ..တဲ့ အဟိ နာလဲ ချင်ကာပူမှာ ကလယ်ရိုက်နေတယ် singlish နဲ့ စီလုပ်သံတွေကြားမှာ ပြီးတော့ အထာမသိတာ ရန်ကုန်မှာတုန်းကတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုတော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စကမစိမ်းပဲ ထမင်းစားရေသောက်ပေမဲ့ ဒီရောက်မှ သူတို့ ဘာပြောမှန်းကို logic နဲ့ပြန်ပြန်စဉ်းစားနေရတယ် အဟတ်ဟတ် (ကိုယ်ညံ့ရင်ညံ့တယ်ပေါ့နော်) ထားပါတော့ အခုဒီပို့စ်ကတော့ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက အရင် ၁၀နှစ်လောက်က ဘ၀သစ် ဦးအောင်ကျော်မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တုန်းက စာအုပ်နောက်ကျောဖုံးမှာ ပါတာလေးကို ရိုက်ပီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် - ကိုယ်တိုင် တကယ်တတ်ပြီး တပည့်တွေကို တကယ်တတ်အောင် သင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာတွေရှားနေလို့ - ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မလုံလောက်လို့။ - အင်္ဂလိပ်စာကို အချန်ယူလေ့လာမှ၊ ဖတ်သမျှနားလည်၊ ပြောချင်ရာပြော၊ရေးချင်ရာရေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်မယ်၊ တကယ်တတ်မယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်ကြပဲ၊ သုံးလေး ငါးလလောက်သင်လိုက်ရင် တတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ အထင်အမှားကြီးမှားပြီး ကြာရှည်မသင်ချင်ကြလို့၊ ခဏတဖြုတ်ပဲ သင်ချင်ကြလို့။ - အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မျိုးစုံဖတ်မှ တကယ်ပြောတတ်၊ ရေးတတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ နားမလည်ကြတဲ့အတွက် ၊ အင်္ဂလိပ်စာကို ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မဖတ်ကြလို့။ - အင်္ဂလိပ်စာ တကယ်တော်အောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့သင်တန်း ကြာရှည်တက်ရတာတို့ အရေးလေ့ကျင့်ရတာတို့လို ကယိကထတွေကို မခံနိုင်ကြလို့။ ဇွဲမရှိလို့၊ တချို့ကြတော့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်ရေးအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ မခံနိုင်ကြလို့၊ ဒါမှမဟုတ်မခံချင်ကြလို့။ - တချို့ကတော့ ဘာအလုပ် ညာအလုပ် ရှုပ်နေကြပြီး အင်္ဂလိပ်စာ တတ်မြောက်ရေးအတွက် အချိန်ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ကြလို့။ - အချုပ်ကတော့ တတ်သာတတ်ချင်ကြပြီး တကယ်တတ်အောင် ဒုက္ခမခံနိုင်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်အောင် ဒါတွေလုပ်ပါ..တဲ့ - အင်္ဂလိပ်စာအုပ်မျိုးစုံ အသံထွက်ဖတ်ပါ။ လွယ်တာတွေ စဖတ်ပါ။ - အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ကြာကြာတက်ပါ။ အလုပ်များရင် ခဏနားပြီး အားတော့ဆက်တက်ပါ။ တော်ရုံတန်ရုံ အလုပ်များရုံနဲ့ သင်တန်းမရပ်ပါနဲ့။ - အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခွေတွေကြည့်ပါ နားထောင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်တီဗီ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်ရေဒီယို နားထောင်ပါ။ - စိတ်တူသဘောတူ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ။ မရှက်ပါနဲ့။ တစ်ယောက်တည်းလဲ အပြောကျင့်နေပါ။(သူများတော့မကြားစေနဲ့ပေါ့)တဲ့ ကဲ.. အားလုံးပဲ တကယ်လုပ်ရင်တကယ်တတ်တာမို့ ကြိုးစားကြဖို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်... Gepostet von
i haveafew friends there. the way they speak english is rather funny for me.But i think singlish is an official language in Singapore i think.My suggestion to improve your English is simple. Just need to getabloke whose first language is English. After 6-12 months of relationship, English would be much improved. i still believe Burmese-Burmese relationship or friendship is not good for English study. You may dump him after sometime when you no longer require. I had an english girl long ago. I gotagreat opportunity to learn english ,their culture, their foods... But later, she was too expensive. needed to pay her bills, i could not afford. so had to flee :-)
ဟုတ် ကဲ့ ပါ ဆရာ ... မ ...တစ်ကယ် ကို လိုအပ်နေတာပါ ... ချစ်သူကို သင်ပေးတာတောင်မှ သူက ဆက်မသင်လို့ .,. ဇွဲ ရှိအောင် က မလွယ် ဘူး ... အကြောင်းပြချက်တွေ က များတယ် ... ရန်ကုန်မှာ ရှိနေရင် ... မမီဆီ ပို့ လိုက်မယ် ... ဟိ :P
Quote: " You may dump him after sometime when you no longer require":OI'm learning Myanmarsar now, so ...
>>Steve: she was too expensive. needed to pay her bills, i could not afford. so had to flee အဲလိုဆိုတော့လေ ဖစ်မှဖစ်ရလေကွာ>>Ko Soe Htet: အနော်က ရန်ကုန်ပြန်သေးဘူးဆို :P>>Alvin Ahkogyi: တိုင်ပြောမှာနော်..:D